Ngaba ubukho ukuncedisana imiphefumlo yabo, lo iqabane umphefumlo womntu, ezifana waziva kwaye kufuneka ube ngaphandle. Okanye uzive ethile nostalgia sihlangana iqabane umphefumlo, ibali yeyela ingqiq...
iqabane Mphefumlo, leyo kuthiwa athe afakelwa nomphefumlo nobomi oludlulileyo, intlanganiso nganye ixesha ngokuphinda ngokutsha amaxesha amaninzi, uye wakha ubuhlobo. Ngoko ke, kusenokwenzeka ukuba na...
Xa ngokuphinda le mfundiso, naye umphefumlo, nto leyo eye wakha ulwalamano olunzulu wadibana ixesha ngalinye Kakade ithuba omkhulu ukuba ukho kweli hlabathi. Sahlukana ndadibana eninzi yabantu, kodwa ...
Xa udibana iqabane umphefumlo ngalinye enye ezitsalwa umphefumlo, kuxa sele waziva ombala omnye komnye. Elo xesha lo ke umahluko phakathi kwabanye abantu, abanye abantu nazo ngaphambili kakhulu, thina...
iqabane Mphefumlo, kuba oko ngamnye ezinye bathanda ngomphefumlo, naye rhoqo xa wadibana kuba ukutshata kunye nophuhliso njengoko ubudlelwane ukuba besini esahlukileyo. Noko ke, iqabane umphefumlo ngo...
Soulmate wekamva, umzekelo, ngokuba abantu basoloko eqhelekileyo, ezifana ziyafana zokuzonwabisa, usoloko usiva ibali komdlalo ngokulula ukuba Demuke endaweni lokonwabela loo nto uyithandayo. Ngokuqin...
Good indlela scry ukwazi iqabane umphefumlo? (Ukubhula, ukuvumisa, ukufunda wesundu, zetelepathy, ezifana imimoya ukujonga)
Umzekelo, abantu umthandi abathandanayo ngoku ufuna ukwazi ukuba okanye hayi kuba baninzi iqabane umphefumlo kwekamva. Abantu ukuba ndiyamthanda ngoku ndicinga sinqwenela kwakhona ukuba ufuna ibe liqa...
iqabane Soul kwaye
Ndicinga kuye kwafunyaniswa ukuba "lo mntu eze kamnandi Ukuba," "engento kwaye oku kungekhona umntu"?hlobo, abantu ubukho Yorisoeru kutheni snugly, ungenza iqabane umphefumlo. A iqabane umphefumlo, ko...